Fahad Yaasiin oo ka soo muuqan kara tartamayaasha Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo ka soo muuqan kara tartamayaasha Aqalka Sare
Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa la filyaa inuu saacadaha soo socda ku dhawaaqo magacyada tartamayaasha u baratamaya kuraasta Aqalka Sare oo uu ku jiro fahad Yaasiin.
JOWHAR, Soomaaliya – Warar ka imaanaya xarunta Maamulka Hirshabeelle, ayaa sheegaya in Madaxweynaha Maamulkaas Cali Guudlaawe, uu liiska tartamayaasha Aqalka sare ee Baarlamaanta 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku matali doona Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, uu ku daray eedeysane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Guudlaawe, oo in muddo ah laga sugayay magacaabidda liiska tartamayaasha sideedda kursi ee maamulukiisu ku leeyahay Aqalka sare, ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda ku dhawaaqo musharixiin uu jiro taliyihii hore ee NISA.
Qorshaha Fahad Yaasiin, ayaa ahaa inuu raadsado kursiga yaalla Golaha Shacabka ee uu hadda ku fadhiyo Faarax Sheeekh Cabdulqaadir, hayeeshee, go’aankiisa ayaa is badelay, wuxuuna doonayaaa inuu si deg deg ah u helo xasaanad Xildhibaan, si uu uga badbaado in la hor geeyo maxakamadda.
Guudlaawe, ayaa dhawaan dadaal xooggan ku bixiyay in Ra’iisul Wasaaha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, uu ka gaabsado kiiska Ikraan, hayeeshee, kadib markii uu fashil ku soo dhamaaday dadaalkaas, wuxuu hadda doonayaa inuu xasaanad u yeelo Fahad.
Fal-celin xooggan ayaa ka dhalan doonta liiska uu soo wado Guudlaawe, waxayna tallaabada Madaxweynaha Hirshabeelle, abuuri doonaa doodo siyaasadeed oo hor leh, khasabna ka dhigi doonta, in mar kale Ra’iisl Wasaaraha Xil-gaarsiinta uu qaato, go’aan kale oo adag.
Hay’adaha Garsoorka, gaar ahaan, Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa baaris ku wada kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo uu ku eedeysan yahay Taliyihii hore ee NISA, sharciga doorashooyinka ayayna ka hor imaaneysaa in eedeysane u tartamo kursi baarlamaan.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay Jowhar ku sii qulqulayay, shaqsiyaad doonaya in ay Madaxweynaha Maamulkaas u caddeeyaan masharraxnimadooda, waxaana hore xarunta gobolka Shabeellaha dhexe u gaaray Sanatar Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, oo afartii sano ee la dhaafaay si weyn kaga arti gadisnaa Maamulkii Fahad ka maamulayay daaha-gadaashiisa.
Guudlaawe, ayaa ka mid ah madaxda uu Farmaajo u boobay kuraasta, wuxuuna si weyn ugu dhowyahay Fahad Yaasiin.